रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर कपडाहरू फज शेभर मैन्युफ्याक्चरर्स र आपूर्तिकर्ताहरू - चेन्हान इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू
घर > उत्पादनहरू > लिन्ट हटाउने > रिचार्जेबल लिन्ट रिमूभर > रिचार्जेबल लिंट रिमूवर कपडा फज शेभर
रिचार्जेबल लिंट रिमूवर कपडा फज शेभर
CHICHONOR को--पात रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर लुग फज शेभरले तपाइँको लुगालाई नयाँ र सफा देखिन्छ! यसले तपाईंको स्वेटरलाई हानी नगरी लिन्टोको गोलीहरू बनाउँदछ। कम्फर्ट ह्याण्डल १ 180० डिग्री घुमाउन सक्दछ लिन्ट हटाउनेलाई तपाईको हातमा आरामसँग फिट हुन अनुमति दिदै। लिन्ट शेभर, इलेक्ट्रोस्टेटिक स्टिक ब्रश र सफा ब्रश एक उपकरणमा छन् जसले कपडाबाट लुगाहरू हटाउन र कपडा सफा गर्न मद्दत गर्दछ पहिले वा यसमा डिज्जिंग पछि। यसले एक उत्कृष्ट अलराउन्डर बनाउँछ - कुनै कपडा प्रकार हटाउनुहोस्, कुनै प्रतिबन्ध छैन।
१.प्रचार उत्पादन रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर कपडाहरू फज शेभरको
यो इलेक्ट्रिक लाइन हटाउने सीई आरओएचएसको साथ उच्च गुणवत्ताको आविष्कार भएको थियो र १ वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्दछ। यो एएबीएससँग बनेको थियो, अधिकांश युरोप र अमेरिकाको बजारलाई कभर गर्दै। हामी चीनमा तपाईंको लामो अवधिका साझेदारको अपेक्षा गरिरहेका छौं।
२ रिचार्जेबल लान्ट रिमूवर कपडा फज शेभरको प्रोडक्ट प्यारामिटर (विशिष्टता)
· आकार: (L) २१..5 X (W) .5.। X (H) १.5..5 सेमी
। वजन: 20२० g
· रंग: सेतो, खरानी, ​​कालो
Source शक्ति स्रोत: 800mAh ली-ब्याट्री (समावेश)
Time चार्ज समय: २ घण्टा
Ated रेटेड भोल्टेज: 7.7VDC
Ated रेटेड पावर: 5W कटर हेड
P.उत्पाद सुविधा र रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर कपडाहरू फज शेभरको अनुप्रयोग
Rec. रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर कपडाहरू फज शेभरको विवरण
सुपर फास्ट रिचार्जेबल र Typ प्रकार चार्जिंग सूचक
२ घण्टा सुपरफास्ट चार्ज, min० मिनेट भन्दा बढीको लागि प्रयोग। चार्ज हुँदा थेरेड लाइटमा छ; एक पटक यो सफा भए, सूचकको प्रकाश हरियो बत्तीमा बदलिन्छ; काम गर्दा theblue प्रकाश छ; ब्याट्री कम हुँदा निलो बत्ती झल्कन्छ।
बायोनिक-हनीसकम्ब सुरक्षा जाल डिजाइन
Mm 65 मीमी लहरहिनकोम्ब डिटेकेबल नेट कभर, कभरेज 50०% ले वृद्धि भयो, s अलग आकारको जाल ट्रिमिंग allsize लिन्ट, गोली, फज र बब्बलहरू, सुरक्षित र चोट नलगाउने लुगाहरू।
--पाना डायमंड स्टेनलेस स्टील प्रेसिजन ब्लेड
Gr-पात स्टेनलेस स्टील रोटरी ब्लेडहरू पिसाईएको र माथि स्वचालित रूपमा तल फ्लोट गर्न सकिन्छ। ब्लेड लम्बाई द्वारा %०%, हटाउने lint अधिक छिटो र सटीक, %०% अरू भन्दा कुशल।
अपग्रेड लिन्ट कन्टेनर
ठूलो क्षमताको लिन्ट कन्टेनर, इम्बेड गरिएको डिजाइन, छुट्टि रोकन, बुद्धिमान पृथक्करण, हल्का प्रेसपराएट, सजिलो र श्रम बचत। कल्पना गर्नुहोस्: LintContainer बन्द गर्न ह्यान्डललाई थिच्नुहोस्।
डिस्क बटन थिच्नुहोस्
दबाव संवेदनशील, रिंगविच थिच्दै (अन / पज / बन्द) - अवकाश, सुरक्षित र एन्टि-टचमा रहन्छ।
R. रिचार्जेबल लिन्ट रिमूभर
प्रश्न:पूर्ण चार्ज पछि कति घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
उत्तर:लगभग २ घण्टा, यो चार्ज हुँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ
प्रश्न:फज हटाउने प्रभाव अन्य fuzztrimmers को तुलनामा कसरी छ?
उत्तर:यसलाई अन्य लिन्ट हटाउने भन्दा कम लिस्टफोर्ट आवश्यक छ र कपडामा नै कोमल छ। कुनै ब्याट्री छैन एक विशाल लाभ प्लस
प्रश्न:के शेभरको ह्यान्डल ओरोटाट प्रयोग गर्न सहज छ?
उत्तर:यस कपडावाटमा १ 180० डिग्री रोटेटी ह्यान्डल छ जुन सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
हट ट्याग: रिचार्जेबल लिन्ट रिमूवर कपडाहरू फज शेभर, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, खरीद, कारखाना, थोक, फेसन, अनुकूलित, चीनमा निर्मित, गुणवत्ता, उन्नत, टिकाऊ, पछिल्लो बिक्री
इलेक्ट्रिक Lint हटाउने कपडा शेवर